Aqalka sare oo waxba kama jiraan ku tilmaamay Afar xeer oo uu Ansixiyay golaha shacabka | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Aqalka sare oo waxba kama jiraan ku tilmaamay Afar xeer oo uu...
Aqalka sare oo waxba kama jiraan ku tilmaamay Afar xeer oo uu Ansixiyay golaha shacabka
Muqdisho (Halqaran.com) – Warqad kasoo baxday guddoomiyaha Aqalka Sare ee Soomaaliya, Mudane Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxbo kama jiraan ku tilmaamay Afarta xeer ee qabyo tirka u ahaa sharciga doorashooyinka Qaranka oo ay dhawaan ansixiyeen Golaha Shacabka.
Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa ugu baaqay Guddiga doorashooyinka inta laga saxayo aysan xeerarkaasi u isticmaali karin doorashada Qaranka, islamarkaana aan loo isticmaali karin doorashooyinka dalka.
Aqalka sare ayaa difaacay kaalinta mugga leh uu ku leeyahay ansixinta sharciyada.
Sidoo kale, Aqalka Sare ayaa sharci darro ku tilmaamay qoraalka Guddoomiyaha Golaha Shacabka u diray Wasaaradda Dastuurka ee ahaa qaraarka Matalaadda Gobolka Banaadir ee Aqalka Sare, iyagoo sheegay in qoraalkaas uu xadgudub ku yahay habraaca xeer dejinta dalka ee ku qeexan Cutubka 6aad madaxa afaraad ee Dastuurka KMG.
Aqalka sare oo sharci darro ku tilmaamay
qaraarka golaha shacabka